The iPhone 7 na iPhone 7 Plus ga-adị na 5 agba dị iche iche | Akụkọ akụrụngwa
Asịrị ọhụrụ a nke sitere na weebụsaịtị Mac Otakara na-egosi anyị agba agba 5 maka iPhone 7 nke a ga-ewepụta n'izu na-abịa n'ihu na Cupertino. N'ezie, ma ọ bụrụ na anyị echee echiche banyere ya n'ụzọ oyi, nke a nwere ike ịdị mfe ma karịa asịrị, enwere ike ịsị na ọ ga-abụ eziokwu. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye agba ojii ma ọ bụ nke miri emi na-acha anụnụ anụnụ nke ụbọchị ndị a enyela ọtụtụ ihe banyere, na agba ndị ọzọ anyị nwere ugbu a na iPhone 6s na iPhone 6s Plus, nke bụ ọlaọcha, isi awọ, bilie ọla edo, na ọla edo.
Ruo ugbu a, ọ bụ eziokwu na Apple ejirila nwayọọ nwayọọ webata ọtụtụ agba ya na iPhone, ọbụlagodi iPad na Mac, yabụ anyị echeghị na nke a bụ ihe ọjọọ maka ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na mgbe ihe mere na iPhone 5 nke a kpụchara site na "naanị ile ya anya", companylọ ọrụ Cupertino nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ahụ ma taa anyị nwere palette agba dị mma ịhọrọ na nke na-adịghị eweta nsogbu nke ịkọ ngwa ngwa ma ọ bụ yiri.
Na foto nkụnye eji isi mee ị nwere ike ịhụ ihe ngosi SIM nke iPhone ma ọ bụ iPad nwere agba 5 dị iche iche yana ọ bụ eziokwu na nchapụta anaghị egosi ma ọ bụrụ na aka ekpe dị oji ma ọ bụ na-acha oji anyị na-aga nwere onye ọzọ iPhone agba ịhọrọ site na. Febọchị ole na ole fọdụrụ maka ngosi nke ọhụrụ iPhone 7 na iPhone 7 Plus nke anyị kwurula banyere ya na Actualidad Gadget n'izu ndị a, yabụ anyị ga-ama n'oge na-adịghị anya ọ bụrụ na nke a ga-abụ agba ọhụrụ nke flagship Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » IPhone 7 na iPhone 7 Plus ga-adị na agba 5 dị iche iche
Ọtụtụ agba na ndị ọzọ nke otu
HacBook, laptọọpụ na-agba ọsọ OS X ma nwee ike kwalite